Colaad ka Jirta Gudaha Itoobiya Ayaa Loo Adeegsanayaa in Lagu Xaliyo Muran Dhuleed Soo Jireen ah oo u Dhexeeya Laba ka mid ah Maamul Goboleedyadeeda Waqooyiga. – Rasaasa News
Jijiga, rasaasa – Mar 16, 2021 – Ciidamo ka socda gobolka Amxaarada ayaa la wareegay dhowr goobood oo ka tirsan Tigray ka dib markii ay taageereen ciidamada federaalka ee duulaanka ku soo qaaday dhulka ay deriska yihiin, ayuu yiri Gizachew Muluneh, oo ah afhayeenka maamulka Amxaarada. Dagaalku wuxuu ka sii socday Tigreega tan iyo markii Raiisel wasaare Abiy Ahmed uu amar ku siiyay ciidanka inay aargoostaan kadib markii xooggag daacada u ah xisbiga talada haya ee Tigray ay weerareen xero militari bishii November.
Dhulka “waxaa lagu qaatay xoog hadana waxaa lagu soo celiyay xoog,” ayuu yiri Gizachew. “In kasta oo aysan ahayn ujeedkeena asalka ah, waxay u dhacday si iska caadi ah.”
Amxaaro, oo ka mid ah labada qowmiyadood ee ugu waaweyn Itoobiya, ayaa sheeganaysa in dhulka lagu muransan yahay uu hoos yimaado maamulkooda. Waxaa lagu qasbay inay dhulka ka baxaan 1991 kadib markii isbahaysi ay hogaamiso isbahaysiga shucuubta qowmiyada Tigreega ay la wareegeen taladii wadanka oo dib loogu qaabeeyey sagaal gobol oo ismaamul hoosaad ah. Gobol 10aad ayaa la aasaasay sanadkii hore.
Maamulka Abiy wuxuu ansixiyay in dib loo eeggo dhulalka lagu muransan yahay, oo ay kamid yihiin Welkait, Tegede, Humera, Telemte iyo Raya, ay yihiin dhulka Amxaarada, sida uu sheegay Gizachew. Go’aan ayaa hadda laga sugayaa Golaha Federaalka si loo sharciyeeyo hawsha, isla markaana Amxaarada si ku meel gaarka ah ay maamuli doonto aagaga, ayuu yidhi.
Baaqyada loo diray Guddoomiyaha Golaha Federaalka, Aadan Faarax, ayaan laga jawaabin. Redwan Hussein, oo ah afhayeenka guddiga hawsha dowladda, iyo Billene Seyoum, afhayeenka Abiy, ayaa diiday inay ka hadlaan.
Abraha Desta, oo xubin ka ah maamulka ku meelgaarka ah ee Tigray ee uu magacaabay Abiy duulaanka kadib, wuxuu diidanaa in dib loo qiimeeyo xuduudaha. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ugu yeeray dowladda “inay joojiso xasuuqa ay geysanayaan ciidamada gaarka ah ee Amxaarada oo ka faa’iideystay farqiga amniga” si ay “ugu soo duulaan oo ay xoog ugu qabsadaan dhulkeena.”
Tobanaan kun oo qof ayaa ka tagay dhulka lagu muransan yahay. Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa usheegay Congress-ka todobaadkii la soo dhaafay in si qasab ah loogu barakiciyay olole u dhigma isir sifeyn – eedeyn ay dowladda Itoobiya ku tilmaamtay “mid been abuur ah”.
Hay’adaha gargaarka ee ka shaqeeya gobolka ayaa xaqiijiyay in qoysan badan oo Tigrey ah si xoog ah looga saaray qaybo ka mid ah galbeedka Tigreega, qaar badanna la dilay, guryo, ganacsiyo iyo beerana la bililiqaystay oo la baabi’iyay.